Ahoana ny fomba hanehoana ny firenena misy antso amin'ny iPhone miaraka amin'ny tweak Area Code Display Pro | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hanehoana ny firenena misy antso amin'ny iPhone miaraka amin'ny tweak Area Code Display Pro
Raha efa nijery bilaogy tany Etazonia ianao, na tamin'ny iPhone tao amin'io firenena io hoe ahoana no anehoana antso, dia azonao angamba fa mahazo fampahalalana bebe kokoa noho ny atolotra any amin'ny firenena hafa eran'izao tontolo izao izy ireo, satria voalaza ao amin'ny antso tonga avy amn'ny tanàna eto an-tany misaotra ny famantarana ireo kaody eo an-toerana sy ireo mitovy amin'ny firenena. Ity safidy ity dia atolotry ny ankamaroan'ny mpandraharaha any Etazonia, saingy zavatra tsy azo raisina any amin'ny firenen-kafa izany.
Ka raha tianao ny iPhone hampiseho aminao amin'ny antso ho avy fa tsy nisoratra anarana toy izany ianao ary amin'ireo izay ao amin'ny telefaona avy aiza no misy ny nomeraon'izy ireo, dia mila tweak antsoina ianao. Area Code Display Pro izay mampanantena fa ny fiasa mitovy amin'ny an'ny Etazonia dia any amin'ny sisa amin'ireo terminal raha mbola vita ny jailbreak.
Ity tweak ity dia mila miasa izay ananan'ny antso ho avy famantarana ny kaody firenena, satria ny sasany dia entina avy amin'ny switchboard virtoaly tsy misy ifandraisany amin'ny toerana iray. Na izany aza, satria tsy misy afa-tsy ireo fitsipika ireo, ny Area Code Display Pro dia hiasa amin'ny tranga rehetra amin'ny alàlan'ny fampidirana ny anaran'ny firenena na tanàna izay iantsoany anao eo ambanin'ny efijery antso ho avy.
Raha tianao ny tolo-kevitra ampanaovan'izy ireo anay Area Code Display ProMila miditra amin'ny toerana anaovana Big Boss fotsiny ianao ary misintona ilay tweak amin'ny vidiny $ 0,99. Raha vantany vao tafapetraka dia hanomboka hampiseho aminao ny mombamomba izay notondroinay isaky ny antso azonao. Mora, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Ahoana ny fomba hanehoana ny firenena misy antso amin'ny iPhone miaraka amin'ny tweak Area Code Display Pro
Tanàna io fa tsy firenena 😉
izay tsy android amin'ny alàlan'ny default?
Salama. Fanontaniana izay tsy misy ifandraisany amin'ity lohahevitra ity.
Azafady azafady azafady amin'ny traikefa
Tsara ve ny mampakatra iPad 8.1.1 sy 8.1.2 iphine avy amin'ny ios 2 ka hatramin'ny 4? Ny zava-dehibe dia ny fahalalana raha mihatsara ny kaonferansa Wi-Fi. Ao amin'ny ios 8.1.1 mihantona ny kodiarana Wi-Fi eo am-pamoahana ireo pejy miaraka amin'ny vokatry ny fotoana maharitra hamaranana tanteraka ireo pejy ..
Santes dia hoy izy:
Izaho koa dia manana 8.1.1 amin'ny ipad2 miaraka amin'i Jailbreak ary tsy manana olana amin'ny wifi lazainao aho. Mandeha haingana ny pejy. Tsy hanana ny olana amin'ny router ve ianao?
Valiny amin'i Santes
Nohavaozina SemiRestore mba hifanaraka amin'ny iOS 8.1.1 sy 8.1.2